Ady amin’ny halatra omby Miandrandra « drône » ny mponin’i Menabe
Ankoatra ny «puce», miandrandra tanteraka ireo fitaovan’ny teknolojia tahaka ny « drône » fanaraha-maso ny tsy fandriampahalemana, indrindra ny halatra omby ireo mponina ao amin’ny faritra Menabe.
Misoko mangina toa roan-gisa izy io, tsy azo lazaina milamina tanteraka amin’iny faritra iny. Velom-bolo ireo olona tamin’ny fampanantenan’ny fampielezan-kevitra ny amin’ireo paik’ady “hiaka farany” amin’ny fisorohana sy fitsaboana ny asan- dahalo, ny fanatanterahana izany sisa andrandrain’izy ireo. Vao tamin’ity herinandro ity mantsy, omby 30 tamin’ireo no tafaverina amin’ny tompony, araka ny ezaky ny Tafika Malagasy mpampandry tany ao amin’ny ZRPS Bravo sy ny fokonolona ny voalohan’ny volana septambra teo tokony ho tamin’ny 11ora atoandro tao Ankilatsy, fokontany Beteva, distrikan’i Miandrivazo. Tonga nankahery sy nisaotra izao ezaka izao ny solombavambahoakan’i Madagasikara voafidy tao Miandrivazo. Tsy any Menabe irery no miandrandra ireo fitaovana teknolojika entina iadiana amin’ny asan-dahalo fa saika ireo faritra manerana ny Nosy. Manantena ny olompirenena fa tahaka izao fihetsiketsehana sy fampiasana “camera de surveillance” amin’ny fitsidihin’ny papa ray masina izao ihany koa no ho ezaky ny mpitandro filaminana amin’ny fiarovana ny ain’ny olona sy ny fananany.